မန္တလေး - ပြင်ဦးလွင် - စစ်ကိုင်း - မင်းကွန်း
၄ ညအိပ် ၅ ရက်
Day 1 ရန်ကုန်မြို့မှည(၇း00)နာရီတွင် ကားစတင်ထွက်ခွာပါမည်။ထို့နောက် ညလယ်စာကိုသုံးဆောင်ရန် ကားပေါ်တွင်အစာပြေမုန်နှင့်COFFEE ၀ေငှေပးပါမည်။
ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း(၃၉)မိုင်တွင် ခေတ္တ ကားရပ်နားပေးပါမည်။ထိုညကို ကားပေါ််တွင် အိပ်သက်အနားယူပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လိုအပ်သောနေရာများတွင်
Day2မနက်စောစောတွင် စစ်ကိုင်းမြို့သို့ ရောက်ရှိပြီး မနက်စာကို စားသောက်ဆိုင်တွင်သုံးဆောင်ကြပါမည်။ထို့နောက် စစ်ကိုင်းတောင်ရှိ ဆွမ်းဦးပုညရှင်၊ဥမင်သုံးဆယ်၊ကောင်းမှုတော်စေတီတို့ကို ဖူးမျှော်ပြီးနောက် မင်းကွန်းဆရာတော်ကျောင်း၊ခေါင်းလောင်းကြီး၊
မြသိန်းတန်စေတီနှင့် ပုထိုးတော်ကြီးတို့ကို ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။နေ့လည်စာကို စစ်ကိုင်းမြို့ရှိစားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် မန္တလေးသို့သွားရောက်ကာ HOTEL CHECK-IN ၀င်ရောက်ကာ ခေတ္တအနားယူကြပါမည်။ညနေပိုင်းတွင် တောင်သမန်အင်းရှိ ဦးပိန်
တံတားသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ထို့နောက် ညစာကိုစားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ကြပြီးနောက် HOTEL သို့ပြန်ရောက် ကာတစ်နေ့တာ ပင်ပန်းမှု့များအတွက်အနားယူကြပါမည်။
If the deposit has not been received.Journey To Myanmar Travel & Tours has the right to cancel the booking.
Rental Reservation should be made directly to :
Office Address:No.23,1st Floor,Wutkyaung St,Yekyaw Ward,Pazuntaung Tsp,Yangon.
TEL: 018610721, 09 8950 700 65 , 09 8950 700 64 , 09 8950 700 63